Shina mandeha ho azy SMC Production Line SMC milina fanamboarana firavaka fanamboarana sy orinasa | Zhengxi
SMC Production Line mandeha ho azy SMC milina fanoratanao taratasy
1.Ny rafitra fanaraha-maso dia fehezin'ny programa PLC, izay afaka mahatsapa ny famoahana mandeha ho azy.
2.Ny resina dia apetraka aloha arakaraka ny habetsaky ny formula napetraky ny programa, ary mijanona ho azy rehefa tratra ny habetsaky ny raikipohy, ary avy eo dia mijanona rehefa apetraka ao anaty ilay refy ny forme ambany.
Fomba fampifangaroana resin tanteraka
1. Ny rafitra fanaraha-maso dia fehezin'ny programa PLC, izay afaka mahatsapa ny famoahana mandeha ho azy.
2. Ny resina dia apetraka aloha arakaraka ny habetsaky ny raikipohy napetraky ny programa, ary ajanona tampoka rehefa tratra ny habetsaky ny raikipohy, ary ajanona avy eo rehefa apetraka ao anaty ilay refy ny mpamorona kely.
3. Seranana famahanana resin, seranan-tsakafo mpampidina shrinkage ambany ary seranan-tsiranoka styrene, seranan-tsakafo mpameno iray dia voatokana ao amin'ny Kettle Stirring.
4. Ny PLC dia afaka mitahiry fomba fahandro SMC maro samihafa, izay azo ampiasaina amin'ny isa.
5. Ny ketrika fikolokoloana dia vita amin'ny vy tsy voadio 201 ho mateza.
6. Ny damina dia entina amin'ny alàlan'ny paompy ampitaina na paompy misy tahan'ny 4-6 metatra toratelo isan'ora.
7. Na ny Kettle manaitra na ny fitoeram-bokatra fitehirizana dia samy manana ny mari-pahaizana momba ny mari-pana amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny paty resin.
8. Ny fihinanan'ny karbaona kalsioma dia fomba fampitana suction, ary ny ora famahanana ny karbaona kalsioma tsirairay dia 10 minitra.
Fitaovana fampifangaroana rafitra fampifangaroana mandeha ho azy tanteraka
1. Voaforon'ny karazana paompy miharo viscosity telo, ny mixers ary ny rafitra fanaraha-maso elektronika
2. Ny paompy A, B, ary C dia entin'ny motera servo. Ao amin'ny fanjakana famokarana, ny paompy B sy C dia manara-maso ny paompy A hamorona fanaraha-maso voahidy, ary manana metatra mikoriana marobe miaraka amin'ny refy telo arivo.
3. B, paompy C dia misy barika fandefasana, 100 litatra sy 50 litatra ny fahaiza-manao
4. Ny paompy B sy C dia entin'ny paompy fandrefesana fitaovana Weiken US avokoa. Ny paompy A dia mampiasa paompy fitaovana Wicken na paompy volo. Ny paompy A, B, ary C dia miaraka amina flowmeters hanaraha-maso ny tahan'ny fikorianan'ny paty magnesia sy ny lokon'ny loko. Rehefa tapaka ny singa A, B, ary C, dia mijanona ho azy ny rafitra an-tserasera.
Andalana famokarana SMC
Ny sakan'ny sarimihetsika plastika
Film Max. savaivony
Sakan'ny takelaka SMC
Araka ny raikipohy
Votoatin'ny fibre 10% -40%
Araka ny filan'ny mpampiasa
Banga amin'ny lelany
Isan'ny kofehin'ny vera
1 / voatendry
Ny halavan'ny fiberglass
Apetraho amin'ny lelan-tsabatra
Fitaovana fanamoriana fanelezana fibre
Hafainganana amin'ny faritra
Faritra mitsivalana amin'ny fehikibo mesh
Ny halavan'ny faritra atsofoka
Herin'ny motera lehibe
Fomba fandokoana loko sy MgO
Masinina lamba SMC-1200
Ketra manaitaitra 2000L (andiana motera 22KW 2 ary setroka reducers 2)
22KW Haingam-pandeha haingam-pandeha & 150L fampifangaroana amponga (vy vy)
Metatra mikoriana avo lenta
Previous: milina fanaovana embossing varavarana
Manaraka: Tsipika famokarana mandeha ho azy
Paompy fandrefesana fitaovana
USA VIKING / France PCM